Mustaqbalka Freighters sano 3 3 bilood ka hor #501
Hello qof walba.
Iyadoo line hadda Freighters lagu si tartiib ah joojinayaa soo baxay, waxaan wareegaya, waxa mustaqbalka ee Shimbiraha kuwanu? Diyaarado sida B747,757,767 ... A300,310 ma aha ee wax soo saarka, waana heer sare lagama yaabo in labada Boeing iyo Airbus tegi doonaa, waayo, versions of Markab 787,777-x, A330Neo iyo A350, sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa inaad weydiiso, maxaad guys u maleynayaa in ku saabsan , waa ay jiraan mustaqbalka wax Freighters?
Maxaa dhici doona marka la soo dhaafay oo ka mid ah Freighters jira waxaa ka fariistay?
Ma waxaad u malaynaysaa in Boeing ama Airbus tegi doonaa, waayo, Freighters leh mid ka mid ah diyaaradaha hadda?
Mustaqbalka Freighters sano 3 3 bilood ka hor #502
Oh My saaxiib, ma waxaad noqon karaa ka dulmi
747 The weli waa mid aad u badan ee wax soo saarka (LABADA pax iyo xamuulka), iyo hadday tahay version Markab xamuul ah 777 ah. Dhab ahaantii, 129 777Fs ayaa la bixiyay ee ah February. 767 ayaa sidoo kale weli waa in wax soo saarka, iyadoo FedEx amro crapload dhan of version Markab xamuul ah
Mustaqbalka Freighters sano 3 3 bilood ka hor #503
... Oh si fiican, waxaan u maleynayaa in aan ahay.
Ka dib markii qaar ka mid ah agagaarka baadhi web site Boeing ee, waxaan ku leeyahay in aan dhab ahaan qaldan ... waxaan ula jeedaa, waxa ay kor u line a ... si fiican u samayn Boeing. Dhinaca kale waa Airbus ... waxaan u maleynayaa in aan xaq iyaga u ahaa ...
Mustaqbalka Freighters sano 3 3 bilood ka hor #508
haa, Boeing waa quruxsan laga cabsado. Dhab ahaantii, waxa aannu hadda iyaga LABAAD mahad B-29s duulaya.
Waqtiga ugu dheer waxay ahayd oo keliya "FIFI", laakiin Thanks to Boeing's plant Kansas, "DOC" dib ayaa loo soo celiyey oo hadda duulimaad ayuu mar labaad ku socdaa. Arrinta xiisaha lihi waa ..... in SAME warshad ... ay ahayd halka DOC uu ku dhashay. Xaqiiqdii, qaar ka mid ah kuwii asal ahaan ka caawiyay dhismaha DOC asal ahaan waxay ka soo shaqeeyeen shaqaalaha hadda Boeing si ay dib ugu soo celiyaan DOC hawada.
Waxaad iga ma sheegi karo in aan waa dameer quruxsan xun
Mustaqbalka Freighters sano 3 3 bilood ka hor #511
Waxaan kaliya la yaabanahay in Airbus aysan ku arki karin suurtagalnimada diyaaradahooda, inta badanna A350 iyo A380. Ma dhahayo in 747 uu xun yahay ama wax yahay, laakiin cabbir buuxa, xamuul laba-laable ah wuxuu noqon lahaa mid cajiib ah. Ku dar tiradaas cajiibka ah, 8 500 nm, marka aynu nidhaahno 1000 ka yar nooca Freighter, taasi wali waa kala sooc qurux badan.
Waxaan kaliya ma fahmi karaan ... Waxay ka hadlayaan qaar ka mid ah barnaamijka Pax-Markab, si loogu badalo diyaaradaha Pax jira in xamuulka .... iyo in i helay fekerayo A340-500 F ... sida dameer xun waa in? Waxaan ula jeedaa, haddii u xusuusan MD-11, waxa uu ahaa musiibo sida diyaarad pax ah, laakiin rigoore on sida Markab xamuul ah.